Maitiro ekuchinjisa mimhanzi kuApple Watch | IPhone nhau
Maitiro ekuchinjisa mimhanzi kuApple Watch
Kana tikaenda kunomhanya, kurovedza muviri, kana kuita rimwe basa, tinogona kunzwa mimhanzi yakachengetwa paApple Watch yedu, iyo yawakachengetera 2GB nzvimbo. Hatina sarudzo imwechete iyo iyo iPhone inotipa isu, uye zvinopfuura izvo ichatipa isu neiyo kusvika kweIOS 8.4, asi inotipa nyaradzo. Zvese zvatinofanirwa kuita kuenzanisa playlist kubva ku iPhone yedu. Inoendesa zvisina waya, uye kupfuura zvese, zviri nyore kuita.
1 Maitiro ekuchinjisa mimhanzi kuApple Watch
2 Maitiro ekuridza mimhanzi yemuno paApple Watch
Takatamba pa mumhanzi.
Takatamba pa Akabvumidzwa Lists.
Tinotamba pane zvakanyorwa iyo yatinoda kuyananisa.
Kana runyorwa rwangopedza kuyananisa, tichava naro rekutamba pane yedu Apple Watch.
Maitiro ekuridza mimhanzi yemuno paApple Watch
Isu tinovhura iko kunyorera mumhanzi pane yedu Apple Watch.
Tinodzvanya nekubata kuti tiwane sarudzo.
Takatamba pa Fuente.
Takatamba pa Apple Watch.
Isu tinobatanidza iyo Apple Watch ine headset yeBluetooth.
Tinosarudza rwiyo chii chatiri kuda kunzwa
Ndinoziva kuti vamwe vashandisi havazobvumirane nekudiwa kweBluetooth headset kuti vakwanise kuteerera mimhanzi yakachengetwa paApple Watch, asi zvinoita sezvine musoro kwandiri kuti nzvimbo inodiwa ne3.5mmmm odhiyo yekubatanidza mune mudziyo haina kutambiswa kwemadiki madiki, tisingataure kuti zvingave zvisina kunaka sei kuve netambo yakasungirirwa paruoko rwedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekuchinjisa mimhanzi kuApple Watch
Uye mimhanzi hairidze kubva kune mutauri anouya mune iyo kesi?
unoipfuudza kune bluetoth mahedhifoni kukwazisa kubva kuuruguay
Techno Fan akadaro
Ini ndinosuwa nhanho gare gare
Nhanho 6 unganidza wachi yeapuro kune simba apo ichinge yakabatana kuburikidza neBluetooth kune iyo iPhone, zvikasadaro nziyo hadzizomboendeswa kune wachi,
Yakakora iPhone nhasi.
Pindura Fan Fan
Hausi kunzwa Apple runyanga chii ??
Iwo gumi anodiwa zvakanyanya tweaks nevashandisi veApple Watch
WAESendAny inobvumidza iwe kutumira chero faira neWhatsApp